Izindaba - Iyini inzuzo enayiloni futhi yimiphi imikhiqizo esiyihlinzekayo ukuze siyikhiqize?
Iyini inzuzo enayiloni futhi yimiphi imikhiqizo esiyihlinzekayo ukuze siyikhiqize?
Imikhiqizo enayilonihasukumelana nokugqoka okuvelele kanye nezakhiwo eziphansi zokungqubuzana.Inayiloni inezinga lokushisa elihle kakhulu, amakhemikhali, kanye nezakhiwo ezinomthelela.Izingxenye ezakhiwe ngomshini noma ezenziwe zinayiloni zinesisindo esilula futhi zimelana nokugqwala.
Thina umkhiqizi we-SHUNDA Sinesipiliyoni seminyaka engama-20 kubhodi leNyiloni/Ishidi,Induku Yenayiloni,Induku ye-PP, i-MC Casting Inayiloni Rod,Inayiloni Tube,I-Nylon Gear,I-Nylon Pulley,I-Nylon Sleeve,I-Nylon Pad,Ibhola Inayiloni,I-Nylon Flange,I-Nylon Chain,I-Nylon Connection,I-Nylon Stick,I-Nylon Screw&Nuts,Isondo Inayiloni,I-Nylon Fitting,Etc
Inqubo icishe ihlukaniswe yaba: ukubumba kwe-MC static, ukubunjwa kwe-extrusion, ukubumba kwe-polymerization.
amapulasitiki obunjiniyela benayiloninjengesamba esikhulu, esisetshenziswa kabanzi kumishini, imoto, izinto zikagesi, izindwangu, izinto zamakhemikhali, ezondiza, i-metallurgy neminye imikhakha.Yonke imikhakha yempilo izoba yizinto zokwakha ezibalulekile, njengokwenza zonke izinhlobo zamabheringi, ama-pulley, amapayipi kawoyela, indawo yokugcina uwoyela, amaphedi kawoyela, ikhava yokuzivikela, ikheji, izembozo zamasondo, i-spoiler, ifeni, indlu yesihlungi somoya, igumbi lamanzi erediyetha, ipayipi lamabhuleki, ihood, izibambo zomnyango, izixhumi, amafuse, amabhokisi e-fuse, amaswishi, i-throttle pedal, i-oiler cap, ukuvikelwa kwekhodi ephezulu nokunye.
Isikhathi sokuthumela: Mar-28-2022